10 Meelaha Ugu Quruxda Badan Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Meelaha Ugu Quruxda Badan Yurub
Waxaa jira astaamo caan ah oo qurux badan oo qurux badan Yurub. Gees kasta gadaashiisa, waxaa jira taallo ama beer la booqdo. Mid ka mid ah xiisaha ugu xiisaha badan uguna cajaa'ibka badan waa isha weyn, oo waxaan gacanta ku qaadanay 10 oo ah ilaha ugu quruxda badan Yurub.
Muusig, Xadgudbayaal, Ilaha Yurub waa kuwo cajiib ah. Laga soo bilaabo Paris ilaa Budapest, bartamaha magaalada ama jasiirad, kuwan 10 ilaha cajiibka ah ayaa gebi ahaanba mudan in la booqdo.
1. Trevi Isha Magaalada Rome
Isha ugu weyn uguna caansan Rome waa isha Trevi. Ishaas quruxda badani way daadanaysaa 2,824,800 biyo cubic feet maalin kasta. Sidoo kale, xilliyadii Roomaanka waxay ahayd isha dhexe ee biyaha. Sayidka, waxaad arki doontaa isha Trevi ee isgoyska saddexda waddo "Tre Vie" saddexda waddo isha.
Haddii ay dhacdo inaadan ogeyn, isha Trevi waa mid ka mid ah toddobada yaabab ee Yurub. Sidaa darteed, layaab malahan in isha ugu quruxda badan Yurub ay kasoo muuqdeen filimaan badan, sida kuwa Fasaxyada Roman.
Aaway Ishii Trevi ee Rome?
Isha biyaha leh ee 'Trevi' waa 10-daqiiqo uun 'laga bilaabo Talaabooyinka Isbaanishka. Waxaad sidoo kale geyn kartaa taraamka saldhiga Barberini.
2. Isha Trocadero
Muuqaalka ugu caansan ee isha Trocadero waa isha Warsaw ee bartamaha. Waa qaab weel, la 12 ilaha ku xeeran. Sidaa darteed, goobta Eiffel Tower iyo ilaha gabi ahaanba waa kuwo kacsan.
The jardiinooyin qurux badan iyo ilaha ayaa markii hore ka mid ahaa Trocadero Palais, iyaga ayaa lagu abuuray 1878 oo leh muujinta guud. Ku wajahan webiga Seine, xagga dambe ee Palais du Chaillot iyo xagga hore ee Eiffel Tower, isha Trocadero waa booska jimicsiga ee Paris, iyo Europe.
Sida Loo Helo Trocadero?
Waxaad u tagi kartaa Jardiinooyinka Trocadero iyo isha metro, saldhigga Trocadero.
3. Isha Latona ee Versailles
Waxaa jira 55 ilo ka mid ah beeraha Versailles, laakiin tan ugu quruxda badan uguna cajaa'ibka badan waa isha Latona. La Latona fountain waxaa dhiirrigeliyay Ovid's Metamorphoses, Latona hooyo Appollo iyo Diana, lagu sawiray iyada iyo carruurteeda ceelkan ammaanta leh.
Ku Wajaha Kanaalka Weyn, waxaad si fudud u ogaan kartaa oo u bogi kartaa aragtida King Louis XIV meel kasta oo ka tirsan Versailles. Inta lagu jiro xilliga sare waxaad ku raaxeysan kartaa isha muusikada bandhigga ee dhacaya 3 jeer usbuucii.
Sida Loo Gaadho Latona?
Daarta Versailles waxay ku taalaa magaalada Versailles, kaliya 45 daqiiqo tareen ka Paris. Tareenka waad u raaci kartaa saldhiga Versailles Chateau Rive Gauche. Markaas waa uun waxyar oo socod ah laga bilaabo saldhiga ilaa qasriga iyo jardiinooyinka.
4. Isha Ilkaha
Bandhigga ilaha muusigga ee ugu caansan Yurub waa bandhigga muusikada muusikada ee Efteling theme park. Waad la yaabi doontaa 12 daqiiqado iftiin iyo biyo, halkaas oo rahyadu biyaha ugu beddelaan bandhig baleel qurux badan.
Nidaamka isha Aqunura waxaa loo dhisay Efteling 60 sanadguuradii. Si aad u soo gabagabeyn, bandhiga muusiggu waa dhammaad aad u wanaagsan oo safar qoys ah oo cajiib ah Xadiiqadda mawduuca Efteling.
Sida Loo Gaadho Isha Il-Baxsan?
Baarkinkaan cajiibka ah wuxuu saacad kaliya u jiraa Amsterdam, sidaa darteed waxay ku habboon tahay qoys madadaalo leh safar maalinle ah oo ka yimaada Amsterdam.
5. 1o Meelaha ugu Quruxda badan Yurub: Isha Trafalgar
Mermaids iyo Tritons waa astaamaha dhexe ee isgoyska Trafalgar Square. Si kastaba ha ahaatee, ka duwan ilaha kale, ma jiro halyeey ka dambeeya xulashada xayawaankan badda ku jira. Isha ugu quruxda badan London waxaa markii hore laga dhisay 1841 si loo yareeyo booska banaanbaxayaasha.
Waxaad ka heli doontaa isha Trafalgar Square oo toos ah fagaaraha Qaranka ee London. Intaa waxaa dheer, waa inaad ogaataa inay tahay meesha reer London u yimaadaan madadaalo kirismas ah. Sidaas, waxaad heli doontaa sabab kale oo weyn oo aad u booqato mid ka mid ah ilaha ugu quruxda badan Yurub.
Sida Loogu Gaaro Isha Isha Trafalgar Ee Magaalada London?
Waad u safri kartaa saldhiga tuubbada ee Charing Cross meel kasta oo ka mid ah London.
6. Isha Swarovski Ee Innsbruck
Gobolka Tyrol waa mid ka mid ah gobollada ugu quruxda badan Austria, iyo sidoo kale guriga xarunta dhexe ee Swarovski. Isha Swarovski waxay ku taal Swarovski Crystal Worlds, kakooban madadaalo iyo cunto. Waxaa dhab ahaan loogu talagalay soo saaraha muraayadda dhalada ah, Swarovski.
Ishu waxay u egtahay sida madaxa nin. Waa mid ka mid ah ilaha ugu caansan Yurub, oo xaqiiqdii waa u qalantaa booqasho marka aad dalxiis ku joogto Austria.
Sida Loogu Tago Isha Swarovski In Innsbruck?
Waxaad awoodi kartaa safarka tareenka laga bilaabo Innsbruck ilaa Swarovski wax ka yar saacad.
7. Jet Deau Jeneva
Diyaaradda biyaha, diyaarad biyo ah oo af Ingiriisi ah, waa isha ugu dheer Yurub waana la gaari karaa 400 mitir. Markii hore, isha ayaa loo dhisay si loo xakameeyo cadaadiska xad-dhaafka ah ee warshad shidaalka ee La Coulouvreniere, laakiin ugu dhakhsaha badan wuxuu noqday astaan ​​awood.
Sidaa darteed, Way adag tahay in la waayo Jet Deau markaad booqato Geneva. Dhab ahaan, waxaad ka heli lahayd jidkaaga harada Geneva, haddii aad si fudud u raacdo diyaaradda biyaha.
8. Ilaha Stravinsky, Paris
Ilaha Stravinsky ee ku yaal Xarunta Pompidou waa amaan muusig oo loogu talagalay halabuurka Ruushka, Igor Stravinsky. Dibnaha midab dhalaalaya, wax lagu qoslo, iyo farshaxanno kale oo foolxun ayaa ka dhigaya il-biyoodkaani mid ka mid ah ilaha ugu caansan Yurub. Naqshadda waxaa sameeyay abuure Jean Tinguely iyo ranjiye Niki de Saint Phalle. Labada farshaxanba waxay leeyihiin qaabab aad u kala duwan: warshad Dadaist ah oo hal dhinac ah, oo dhalaalaya dhinaca kale. Sidaas, wada, shaqadooda waxay u dabaaldegaan muusikada casriga ah ee casriga ah ee qarnigii 20aad.
Shaki la’aan, isha Stravinsky ayaa soo jiidan doonta dareenkaaga markaad ku qanacdo. Xaqiiqdii waxay u egtahay goobjoogga waxqabadka circus ee laga soo galo xarunta adduunka ee caanka ah ee Pompidou.
Sideen Ku Gaadhaa Ilaha Stravinsky?
Fontaine Stravinsky waxay ku taal irida laga galo xarunta Pompidou. Waxaad u raaci kartaa Metro-ka saldhiga Hotel de Ville.
9. Ishii Margaret Island Musical ee Budapest
Isha ugu weyn ee Hungary waxay soo bandhigtaa muusik cajiib ah iyo laser show saacad kasta. Maajo illaa Oktoobar, waa waqtiga ugu fiican ee la booqdo Jasiiradda Margaret ee Budapest. Waad ku raaxeysan kartaa dalxiis inta aad daawaneysid muuqaalka biyaha iyo nalalka.
Muuqaal kale oo ka dhigaya isha Krizikova mid ka mid ah 10 ilaha ugu quruxda badan Yurub, waa in uu jiro qorshe bandhig muusiko oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn.
Sideen Ku Gaadhaa Isha Margaret Island?
Waxaad uga tagi kartaa isha Margaret Island bartamaha magaalada Budapest tareen.
10. Krizik Isha Magaalada Prague
Isha qoob ka ciyaarka, Isha Krizik, wuxuu ku yaal meel u dhow xarunta carwadda ee Prague. Ka bilaabanaya 8 pm ilaa saq dhexe, waxaad ku raaxeysan doontaa nalalka ugu fiican iyo muusikada ugu fiican. Waxaa jira 4 waxay muujisaa marka mid waliba gabi ahaanba ka duwan yahay kan kale muusikada iyo nalalka.
Isha muusigga ee Krizik waxaa laga dhisay gudaha 1891 xarunta bandhigga. Waxay madadaalineysay dadkii badnaa ilaa waqtigaas. Fiidkii riwaayaddu waxay noqon doontaa dhammaad wanaagsan illaa maalin qurux badan oo ku taal Prague.
Sideen Ku Gaadhaa Krizik?
Waxaad si fudud ugu tagi kartaa isha Krizik tareenka si aad u dhigto xarunta Vystaviste.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inuu kaa caawiyo inaad hesho tikidhada tareenka ugu jaban mid ka mid ah ilaha quruxda badan ee Yurub.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka “10 ilaha ugu quruxda badan Yurub”Bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-fountains-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
In link soo socda, waxaad ka heli doontaa jidadkeena tareenka ugu caansan - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- link this waa wadooyinka Ingiriisi bogagga degtey, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, waxaadna ku bedeli kartaa tr ilaa pl ama nl iyo luqado badan oo aad doorato.
Buuraha Qurxoon Safarka Yurub Ilaha biyaha FountainInEurope MusicalFountain tareen safarka